I-Indiya iphelisa yonke imiqobo yokuhamba, iphinde ivule imida ukusuka nge-15 ka-Okthobha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Indiya iphelisa yonke imiqobo yokuhamba, iphinde ivule imida ukusuka nge-15 ka-Okthobha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amagosa oMphathiswa Wezasekhaya bagqibe kwelokuba baqale ukunika iiVisa zabakhenkethi abatsha abantu bamanye amazwe abaza eIndiya ngeenqwelo moya eziqeshiweyo ukusukela nge-15 ka-Okthobha ka-2021.
I-Indiya yazisa ngokungqongqo ukuvala kunye nokumisa ii-visa zabantu bamanye amazwe ngenxa yesoyikiso esabangelwa sisifo se-COVID-19 ngo-Matshi 2020.
Ukuvulwa kwakhona kuza njengoko i-India ifuna ukuvuselela uqoqosho lwayo emva kwamaza amakhulu e-COVID-19 ngaphambili kwi-2021.
Amagosa aseIndiya afuna ukomeleza uqoqosho ngokunceda ekumiseni kwakhona ukhenketho, nelicandelo elibalulekileyo kuqoqosho lwelizwe.
Ngomhla ka-Matshi ka-2020, Inkulumbuso yase-India u-Narendra Modi wamisela ukuvalwa ngendlela engqongqo kwaye waqhawula zonke ii-visa zokungena kubakhenkethi bamanye amazwe ngenxa yesoyikiso esibi esiveliswe sisifo se-coronavirus, ukuvala imida yelizwe kubakhenkethi bamanye amazwe.
Namhlanje, amagosa aseburhulumenteni e-India abhengeze ukuba urhulumente uza kuyivula kwakhona imida kubakhenkethi bamanye amazwe ukuqala nge-15 ka-Okthobha, ekugqibeleni ephelisa izithintelo eziqhubeke ngaphezulu konyaka.
Indiya 's Icandelo loMphathiswa Wezasekhaya ukhuphe ingxelo ngolwesine, ebhengeza ukuba amagosa aseburhulumenteni "athathe isigqibo sokuqalisa ukunika iiVisa zabakhenkethi abatsha abantu bamanye amazwe abaza eIndiya ngeenqwelo moya eziqeshiweyo ukusukela nge-15 ka-Okthobha ka-2021."
Ukuvulwa komda kwakhona kuza Indiya ifuna ukubuyisa uqoqosho lwayo emva kwamaza amakhulu e-COVID-19 kwangoko kwi-2021 eyakhokelela kumacala angama-400,000 osulelo kunye nokufa kwabantu abangama-4,000 ngosuku, izibhedlele ezixineneyo nokunyanzelisa amanyathelo angqongqo ukuba athathwe ukuzama ukwanda kwintsholongwane .
Ngama-Indiya angaphezulu kwezigidi ezingama-250 ngoku ajijwe kabini kwaye amatyala ehle ukuya kuthi ga kwi-20,000 ngosuku, amagosa azamile ukomeleza uqoqosho ngokunceda ukumisela kwakhona ukhenketho, nelicandelo elibalulekileyo kuqoqosho lwase-India.
Impembelelo yezithintelo ikhubazeke kakhulu Indiya Umzi mveliso wezokhenketho, ukhokelele kubatyeleli abangaphantsi kwezigidi ezi-3 ngo-2020, nokuhla okuyi-75% ukusuka kunyaka ophelileyo, ngokweenkcukacha-manani zikarhulumente.
Nangona kunjalo, ngaphandle kokukhuthaza ukubuyela kwabakhenkethi e-India, urhulumente welizwe wayecaca gca ukuba zonke iindwendwe ziya kulindeleka ukuba zilandele imigaqo yokhuseleko ye-COVID-19 ngexesha lotyelelo lwabo. Akukacaci nangona yeyiphi imfuneko yokuba iindwendwe ziya kulindeleka ngaphambi kokuba ziye kwilizwe.